Otu esi etinye desktọpụ Xfce na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
Wụnye ebe nchekwa EPEL
Wụnye Xfce na AlmaLinux
Lelee mbụ & nyochaa Desktọpụ Xfce
Otu esi emelite ngwugwu Desktọpụ Xfce
Xfce bụ gburugburu desktọpụ mepere emepe maka sistemụ arụmọrụ dịka UNIX. Emebere ya ka ọ bụrụ ngwa ngwa na ọkụ na akụrụngwa sistemu ebe ọ na-adọrọ adọrọ karịa gburugburu desktọpụ ndabara nke nwere ọtụtụ sistemụ arụmọrụ na-ebu ụgbọ mmiri. Xfce bụ ihe ama ama na sistemu ochie nwere ngwaike dị ka isi ihe dị na imewe ya bụ ichekwa ma ebe nchekwa yana okirikiri CPU.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Xfce na desktọpụ AlmaLinux gị.
Tupu ịwụnye desktọpụ Xfce, mepụta nkwado ndabere na mpaghara ma ọ bụ atụmatụ ma ọ bụrụ na ịchọghị ya ma chọọ ịtụgharị azụ. Iwepu Gburugburu Desktọpụ ọ bụla adịghị mma na ọ ga-eduga na nkwụsi ike nke sistemu yana ngwa enweghị usoro ka arụnyere. N'ozuzu, ọ bụ usoro na-egbu mgbu ịlaghachi na steeti mbụ tupu etinyere ngwugwu ahụ, karịsịa maka onye ọhụrụ na nkezi onye ọrụ.
Ọrụ mbụ bụ ịwụnye EPEL (Ngwugwu Mgbakwunye maka Linux Enterprise) ebe nchekwa. Ebe nchekwa a nwere ngwugwu edobere na Red Hat Enterprise (RHEL).
Mepee ọnụ ọnụ gị, wee jiri iwu na-esonụ.
Ọrụ nke abụọ tupu ịwụnye KFCE bụ ime ka ebe nchekwa ngwaọrụ ike. Nke a na-enye ohere iji ngwaọrụ njikwa ngwugwu Linux ọkọlọtọ gị, yum maka Red Hat Enterprise Linux na zypper maka SUSE Linux Enterprise Server, iji wụnye ngwugwu ndị ị chọrọ na-akpaghị aka n'usoro nke sistemu chọrọ.
Ugbu a gaa n'ihu na akụkụ nkuzi na-esote wee wụnye Xfce.
Site na ebe nchekwa achọrọ arụnyere, ị nwere ike ịmalite ịwụnye desktọpụ ọzọ maka sistemụ AlmaLinux 8 gị.
Nke mbụ, n'ọnụ ọnụ gị, gbaa mbọ hụ na Xfce dị.
Ugbu a gaa n'ihu tinye desktọpụ Xfce na Xorg.
Ọzọ, họrọ "Oge Xfce" kama ndabara "Standard."
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ mgbanwe UI ole na ole ma e wezụga ụdị agba na mgbanwe ndabere. Ogwe ọrụ ugbu a yiri ụdị ọrụ windo ọzọ, yana mgbakwunye ndị ọzọ n'akụkụ aka ekpe na aka nri nke ọrụ ebe ngosi oge dị.
Ma nke ahụ bụ ya, ma ị tinyela desktọpụ XFCE 4.16 nke ọma na sistemụ arụmọrụ AlmaLinux 8 gị.
Gbaa iwu nkwalite dnf ọkọlọtọ maka mmelite n'ọdịnihu maka gburugburu desktọpụ Xfce yana ngwungwu ndabara ọ bụla sitere na App Stream.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye gburugburu desktọpụ Xfce na sistemụ arụmọrụ AlmaLinux 8 gị. N'ozuzu, ọ bụ nhọrọ siri ike yana ọ na-emekarị na mwepụta kacha ọhụrụ sitere na Xfce.
Dị ka o kwesịrị, ị nwere ike ịwụnye ngwugwu a wee gbanwee dabere na ọnọdụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere usoro dị mma. Ọ bụrụ na-amasị gị ịwụli elu desktọpụ, ọ bara uru ịlele ma ọdịdị ahụ masịrị gị. M ga-atụ aro ka ịwụnye VM mbụ, emesia na igwe isi gị ma ọ bụrụ na ejighị n'aka.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux, gburugburu Desktọpụ, Gburugburu Desktọpụ Xfce Mail igodo